K: 07-07-07 သို့ ..သမိုင်းအပိုင်းအစများ
07-07-07 သို့ ..သမိုင်းအပိုင်းအစများ
ထူးထူးခြားခြား..ဒီနှစ်မှာ..ခုနစ် (၇) တွေချည်းထပ်နေသည်..
ကိုယ်တွေအတွက်..instant Encyclopedia လည်းဖြစ် instant History Book လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့-အဖေ့ဆီကနေ..အကြောင်းခြင်းရာတွေကိုသိခဲ့ပေမဲ့..တကယ့်ခံစားချက်တွေကတော့..သူတို့ရဲ့အိုမင်းလှပီဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေမှာသာ..တွေ့နိုင်ပေတော့မည်။
ဒီနေရာမှာ Union လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂအဆောက်အအုံကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။
စေတနာရှင်သူဠေးဦးညိုကလှူဒါန်းဆောက်လုပ်ခဲ့လို့ ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှာ တကသ (တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ)၊ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ RUSU (Rangoon University Students' Union) ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး တကသ ဥက္ကဠက ကိုကျော်ခင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၅-၃၆ ခုနှစ် မှာတော့ ကိုနု (၀န်ကြီးချူပ်ဟောင်းဦးနု) က ဥက္ကဠဖြစ်လာခဲ့ပီ မစ္စတာရာရှစ် (၀န်ကြီးဟောင်း)၊ ကိုကျော်ငြိမ်း
(ဒုဝန်ကြီးချူပ်ဟောင်း)၊ ကိုအောင်ဆန်း (လွပ်လပ်ရေးဖခင် အမျိူးသားခေါင်းဆောင်) တို့၊အမူဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ၊ ဒုတိယကျောင်းသားသပိတ်ကြီးမှောက်ခဲ့ပီး သပိတ် ကာလအတွင်းမှာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗကသ) ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ခေါင်းဆောင်တွေ သူရဲကောင်းတွေ အာဇာနည်တွေမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့
သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကြီးဟာ အလျားပေ ၂၀၀ ခန့် အနံပေ ၅၀ ခန့်ကျယ်တဲ့ နှစ်ထပ်အုပ်တိုက် အဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်မှာ အ၀င်တံခါးပေါက်ကြီးရှိပီး သံတံခါးတယ်ကာ တံခါးအပေါ်
လေ၀င်ပေါက်ကို သံပန်းတပ်ထားပါတယ်။ သံပန်းမှာ ဦးညို၏အလှူ ဆိုတာကို လက်မ၀က်ခန့် လေးထောင့်သံချောင်းများနဲ့ GIFTED BY U NYO လို့ ပုံဖော်ထားပါတယ်။ အဲဒီတံခါးက၀င်လိုက်ရင် ဘယ်ဘက်မှာ အပေါ်ထပ်ကိုတက်တဲ့ ကြောင်လိမ်လှေကား ရှိပါတယ်။ ညာဘက်မှာတော့ သန့်စင်ခန်းရှိပါတယ်။ ဒီတံခါးခန်းက ဆင်ဝင်သဘောမျိူးရှေ့ထွက်နေတာပါ။ အဲသည်ကကျော်ပီး အထဲဘက်
၀င်လိုက် ရင်တော့ ကော်ရစ်ဒါစင်္ကြံလမ်းကို တွေ့ရမယ်။ ဒီစင်္ကြံကတောက်ရှောက်ပါ။ ဘယ်ဘက်ကို သမဂ္ဂစားသောက်ဆိုင် မီးဖိုခန်းအထိနဲ့ ညာဘက်မှာ သမဂ္ဂဆံပင်ညှပ်ဆိုင်အထိရှိပါတယ်။
အောက်ထပ်ကို ငါးပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ ဘယ်ဖက်ကစရင် အစွန်ဆုံးမှာ ပေငါးဆယ် ပေသုံးဆယ် ခန့်ကျယ်မည့် မီးဖိုခန်း အဲသည်နောက် နှစ်ဘက် ကော်ရစ်ဒါရှိတဲ့ အလျားပေ ခြောက်ဆယ် အနံပေလေးဆယ်ခန့်ရှိပီး၊ ဆက်တီအမြင့်ပုံစံလေးယောက်ထိုင်စားပွဲကုလားထိုင်စုံ ၁၂စုံခန့် (လူငါးဆယ်လောက် တပြိုင်တည်း သက်တောင့်သက်သာထိုင်နိုင်မည်) ဆန့်တဲ့ သမဂ္ဂ စားသောက် ဆိုင်ခန်း၊ အဲဒီနောက် သတင်းစာများထားတဲ့အခန်း၊ နောက် သမဂ္ဂအိမ်တွင်းအားကစားခန်း၊ ဒီနောက်မှာ မီးဖိုလောက်ပဲကျယ်တဲ့ ဘကြီးကံသိန်းရဲ့ သမဂ္ဂဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။
အင်း..အဖေက..အတိုင်းအတာတွေ အရွယ်တွေကို အသေးစိတ်တွေရေးထားပေမဲ့..သိပ်ပုံမပေါ်သလိုပဲ...ဟော..ဒီပုံပဲ..ဒီပုံပဲ..။ ပုံနဲ့တိုက်ကြည့်မှပဲ..ပိုပီးမြင်လာတယ်..ယူနီယံကြီးရဲ့ခမ်းနားပုံက..တကယ်ပါပဲ...
အလယ်လမ်းက ကော်ရစ်ဒါရောက်တဲ့အခါ ညာဘက်မှာ ဥက္ကဌအခန်းနဲ့ အတွင်းရေးမှူးအခန်း၂ခန်း ရှိပါတယ်။ ဒီ ၂ ခန်းဆုံးတော့ ကော်ရစ်ဒါဆုံးပီး စာကြည့်တိုက်ခန်းမ အ၀င်တံခါးကို တည့်တည့်
ရောက်ပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ခန်းကလည်း အစည်းအဝေးခန်းမလောက်ပဲကျယ်ပီး စစ်မဖြစ်မီက နိုင်ငံရေးစာအုပ်အစုံဆုံးလို့ နံမယ်ကြီးတဲ့ စာကြည့်တိုက်ပါ။ စစ်အတွင်းမှာ စာအုပ်များနဲ့ ဘီရိုတွေ ပျက်စီးသွားလို့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်လောက်မှာမှ အဲဒီအချိန်က ၀န်ကြီးချူပ်ဦးနု ဦးဆောင်ပီး စာကြည့်တိုက် ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ရန်ပုံငွေ အမြောက်အမြားလှူခဲ့ပီး စာကြည့်တိုက်အသစ် ပြန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းရဲ့ အနောက်ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်မှာလည်း အစည်းအဝေးခန်းမရဲ့ အပြင်မှာလို L ပုံ ကော်ရစ်ဒါကျယ်ရှိပါတယ်။ မျက်နှာစာနှစ်ဘက်ကို လှည့်လို့ပေါ့။
စစ်ကြိုခေတ် ဒါမှမဟုတ် လွပ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမူခောတ်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ
ဒီသမဂ္ဂထဲမှာ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားသွားလာ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတော့မမှီလိုက်ပါ။ တခါတရံ ဘကြီးကံသိန်းကိုမေးကြည့်မှ ၀ိုးတ၀ါးသိရတတ်ပါတယ်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်က ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဆယ်စုနှစ် အတွင်းမှာတော့ သမဂ္ဂနဲ့ အဆက်မပြတ်ခဲ့တဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်ပင် ၀ိညာဉ်တွယ်ခဲ့ရတာမို့ သမဂ္ဂရဲ့ သရုပ်ကို ဖမ်းမိဆုပ်ကိုင်မိပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဆိုင်နေရာမှာ စစ်ကြိုခောတ်ဦးပိုင်းက ဦးကြီးဖာနီဗယ်ရဲ့ Burma Book Club ရှိခဲ့ဘူးပီး အဲဒီကလပ်ကပဲ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်မျိူးစုံတင်ပီး ရောင်းခဲ့ ရုံမက တို့ဗမာအစည်းအရုံး စတင်တည်ထောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မီးတုတ်သခင်သိန်းမောင်ကြီးကို မွေးထုတ်ခဲ့တာပါ။
ကြည့်ပါဦး..ဖာနီဗယ်ဆိုတာ..အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အုပ်ချူပ်ရေးစနစ်နဲ့အတူ အမူထမ်းရအောင် ဗမာပြည်ကို ရောက်လာရင်း ..ဗမာလွပ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမူကို တဖက်တလမ်းကပံ့ပိုးခဲ့တာ... ဘယ်လောက်အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေလဲ..
သမိုင်းသုတေသနတွေလုပ်ရင်း ဗမာပြည်ကိုချစ်လွန်းလို့.. ခေါင်းချဖို့ကြံပေမဲ့လည်း.. ပညာရှင်တွေကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းမသိ ၀န်တိုအညှိုးကြီးမူတွေကြောင့် ...စွန့်ခွါသွားခဲ့ရသူ...
သမဂ္ဂစားသောက်ဆိုင်မှာ ခမ်းနားလွန်းလို့ အစကမ၀င်ရဲပါ။ နောက်တော့လည်း တခြားဆိုင်များမှာ ပေးရတဲ့ အဖိုးအခနဲ့ပင် ကျောင်းသားတွေ ခမ်းခမ်းနားနား စားသောက်ရအောင် စီမံထားတာလို့ သိရပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ကုလားထိုင်စားပွဲတွေက ဆက်တီခပ်မြင့်မြင့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ စားပွဲမှာ မှန်ခင်းထားပီး ကုလားထိုင်တွေကလည်း ပါလစ်ရောင်တောက်နေတာပါ။
ဆိုင်ရဲ့ အခမ်းအနားဆုံးအရာကတော့ ထိပ်ဘက်နံရံမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပုံတူ ဧရာမပန်းချီ ကားကြီးပါ။ ဆရာကြီးဦးဘကြည်လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ပြည့်သူ့ရဲဘော် ယူနီဖောင်းနဲ့ ဆက်တီကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ပုံကို ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားကြီးပါ။ ဒီပုံကြီးကပဲ ကျနော်တို့ကို ဆိုင်ခန်းထဲမှာအိနြေ္ဒရရနေထိုင်အောင် ဖန်တီးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘေးဘက်နံရံမှာ ပန်းချီကားတချိူ့ချိတ်ထားပီး ကျနော်တို့ရောက်စမှာ အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သမဂ္ဂစားသောက်ဆိုင်ကို တင်ဒါရတာက ပန်းချီဦးနန်းဝေဖြစ်လို့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပုံ ပန်းချီကားကြီးကလွဲလို့ ကျန်ပုံတွေနေရာမှာ သူ့ပန်းချီကားတွေနဲ့ အစားထိုးပီး ချိတ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပုံတူပန်းချီကားကြီးကတော့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကြီး ဗုံးခွဲခံရတဲ့အချိန်မှာ တပါတည်းပါသွားတဲ့အထိ ဒီနေရာမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခန်းဖြစ်တဲ့ စာဖတ်ခန်းထဲမှာလည်း သမဂ္ဂဥက္ကဌဟောင်း ကိုနု ကိုဗဆွေ ကိုဗဟိန်း ကိုအောင်ဆန်းတို့ပုံတွေအပြင် ဗိုလ်အောင်ကျော်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကြီးများချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒီပုံတွေကြည့်ပီး ဘကြီးကံသိန်းကိုမေးတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုလည်းပေါ့လေ။
“ အို..ကိုနုကတော့ ဘုရားလောင်းပဲ..ဥပုဒ်နေ့တိုင်းရွှေတိဂုံကုန်းတော်ကိုတက်တယ်။ ဘကြီးလည်းခေါ်ခေါ်သွားလို့ လိုက်ရတယ်။ တခါကတော့ ကိုအောင်ဆန်းလည်းပါတယ်..ကိုနုက အုတ်ခဲတခု ရှေ့မှာချပီး မျက်လုံးမှိတ်ရွတ်နေပါတယ်...ကိုအောင်ဆန်းက ခင်ဗျားအုတ်ခဲကြီး ကြည့်ရွတ်နေလို့ လွပ်လပ်ရေးမရဘူးဗျ ..ဆိုပီး အုတ်ခဲကိုယူလွှင့်ပစ်တယ်။ ကိုနုကတော့ တယ်ခက်တဲ့အောင်ဆန်းပဲ ဆိုပီးရီနေတယ်..ကိုအောင်ဆန်းက ဂွကျတယ်..ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်က ဆုံလည်ကုလားထိုင်ပေါ်တက်ထိုင်လို့ ဆံပင်ညှပ်မယ်ထင်ပီး ခြုံထည်ခြုံကာမှ..ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်သူက ဆံပင်ညှပ်မယ်ပြောလို့လည်းဆိုပီး ဟောက်ချင်ဟောက်တာ...ဒီ့ပြင် ဆံပင်ညှပ်မဲ့သူ လာလည်း ထမပေးပဲ စာပဲမဲဖတ်ချင်ဖတ်နေတာ..”
“ ဟာ..သူကတော့ လှစ်လှစ်ကလေးရယ်..ကိုဗဆွေနဲ့တော့ တခြားစီပဲ..”
“ ဟာ....သူကတော့ မင်းသားပဲ..”
ဒီလိုနဲ့ ဘကြီးကံသိန်းဆီက မှတ်ချက်တွေဟာ အပြင်က ဒဂုန်တာရာတို့ တခြားဝေဖန်ရေးသားသူတွေနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သမိုင်းဝင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးတွေအကြောင်းက သူတို့အတွက် တထောင့်တည ပုံပြင်တွေ တောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေခဲ့မှာ...
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာတွေကို သည် တကသ ကပင်မွေးထုတ်ခဲ့တာပါ။
“အော်..အထက်ဗဟိုက၊ ပျက်ပြိုလို့ကျခဲ့တဲ့၊ ကနက်ဗဟိုပလ္လင် လက်စအကြွင်းပေထင့်၊တက္ကသိုလ်
သဘင်သမဂ္ဂ အသင်းဆီက၊ အဆက်သမတ သနင်းတွေနဲ့၊ တြင်းန၀င်းကောင်းကျိူးအထွေထွေ၊ တက်ကွအတင်းဟေ့လို့ အကွက်ကျကျနင်းပီး၊ ခက်သမျှရှင်းပေမည့်၊ သတင်းဒေါင်းအိုးဝေ...။”
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းကပင် ညွှန်းဆိုခဲ့ရသော သမဂ္ဂအသင်းပါပေ။
“ ရွှေဒေါင်းအိုးဝေမဂ္ဂဇင်းဆီက၊ အဆက်မကင်းတဲ့ သံသရာမှာ၊ တပည့်အရင်းရဲ့ စံပမာရွယ်ရည်ရှာတဲ့၊ အယ်ဒီတာမောင်ညိုမြရဲ့ပြင်၊ အော်..ဗမာ့အတွက်ဖြင့်၊ မရသမျှ ပွက်မကွဆိုတဲ့၊ သမဂ္ဂ ဥက္ကဠ မောင်ဘဂျမ်းတို့ကို၊ ဓဇဂ္ဂသုတ်အရ၊ အောင်တဖွဖွမန်းရာက၊ အောင်ဇယပန်း ညောင်သပြေနုချိန် မတော့၊ နောင်မြန်မာ့စတမ်း မောင်ရွှေနုရယ်လို့ ၊ အောင်ဇေယျတု မြွတ်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်၊ တက်ဘုန်းကြီး ဆရာသိန်းဖေကလေးတို့ကိုဖြင့်၊ ယိမ်းမသွေ ကိန်းသေ ရွေးလိုက်ကဲ့၊ အရေးရှိလျှင် အရာပေါ် ကြပေတော့...” ဆရာကြီးမှိုင်းက နိမိတ်ဖတ်ပြီး တပ်လှန့်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးက တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂဆီက ခေါင်းဆောင်များကို မျှော်မှန်း အားရခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးမျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းလည်းတကသ ဟာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမူစတင်ခဲ့ရာ
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ အဲဒီနေ့ဟာ စနေနေ့ပါ။ နေ့လည် တစ်နာရီမှာ သမဂအစည်းအဝေး ခန်းမမှာ အစည်းအဝေးကျင်းပပါတယ်။ ဥက္ကဌက ကိုဗဆွေလေးပါ။ အခန်းအနားမှူးကတော့ ကိုသာဒိုးလား ကိုလှရွှေလား မမှတ်မိတော့ပါ။ အစည်းအဝေးမှာ ကျောင်းသားထု တခဲနက် ဆုံးဖြတ် တာတွေထဲက မှတ်မိသလောက်ကတော့...
ကျောင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်တဲ့ စည်းကမ်းအမျိူးမျိူးကို ကန့်ကွက်တယ်။ စစ်တပ်က အာဏာ သိမ်းတာကိုလည်း ကန့်ကွက်တယ်။ တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေများကို ရုတ်သိမ်းတာကိုလည်း ကန့်ကွက် တယ် စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးအပီးမှာ သမဂ္ဂရှေ့ကစပီး ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာပဲ ကြွေးကြော်သံများကြွေးကြော်ကာ လှည့်လည်ပီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့မှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပဲ လူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်။
တနာရီလောက် ကစားပီးပြန်လာရေချိူးပါတယ်။ ရေချိူးပီး အခန်းရှေ့မှာ တဘက်နဲ့ရေသုတ်နေတုန်းမှာပဲ Main (ဗဟိုဆောင်များ) ဘက်က အတွဲလိုက်ဆွဲပစ်လိုက်တဲ့ သေနတ်သံတွေကို ကြားရပါတယ်။ ရပ်လိုက်ပစ်လိုက်ပဲ ။ ခဏကြာ ဗဟိုဆောင်ဘက်မှ ပြေးလာသူများကို မြင်ရပါတယ်။ အော်လည်းလာကြပါတယ်။ အ၀ိုင်းလေးနားမှာ စစ်တပ်က ပစ်ကုန်ပီတဲ့။ အ၀ိုင်းလေးနားမှားဆိုရင် အဓိပတိလမ်းတံခါးမကြီး ပီးတော့ တကသ နဲ့ မန္တလေးဆောင် အမရဆောင်ပေါ့။ တကသ မှာ ပြသာနာတော့ဖြစ်ပီထင်ရဲ့။
နောက်တနေ့ (ဇူလိုင် ၈ ရက်) နံနက်လင်းအားကြီးမှာတော့၊ အလွန်ကျယ်လောင်တဲ့ ပေါက်ကွဲသံကြီးကြောင့် အားလုံး လန့်နိုးကုန်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးပင် ၀ုန်းကနဲပွင့်သွားပါတယ်။ တံခါးက အောက်မင်းတုန်းချရုံချထားလို့ပွင့်တာဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီလိုပွင့်ရလောက်အောင်၊ အတော်ကြီး ပြင်းထန်တဲ့ ပေါက်ကွဲမူတခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ပြန်မအိပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
သြော..ဇူလိုင် ၇ ရက်နဲ့ ၈ ရက်ကို..ခွဖြစ်ခဲ့တာပဲ..၇ ရက်နေ့မှာ ၀င်စီးပီး..၈ရက်နေ့မှာမှ..ဖောက်ခွဲ
ည (၇) နာရီတွင်တော့ ရေဒီယိုက ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ တိုက်ရိုက်အသံလွှင့်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
ကျနော်တို့ မှီလိုက်သလောက် ကြားလိုက်သလောက်....
“ ကျွန်တော် တိုင်းပြည်တာဝန်ယူသည့်အချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများရဲ့ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့
ဘ၀ကိုပြင်ရမဲ့တာဝန်ပါ ကျရောက်နေလို့ တပ်မတော်ရဲ့အင်အား တစ်ိတ်တဒေသကို သုံး၍ ဖြေရှင်း လိုက်ပါသည်..” တဲ့...။
“ အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာ ကျောင်းသားကိစ္စတခုတည်းမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေး အမှောင့်ပရောဂများ ဖမ်းစား တယ်ဆိုတာ ..ရိပ်စားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အလုပ်ပျက်ကွက်အောင် ရည်စူးပီး
တမင်လုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ်ဘာမျှမပြောလိုပါဘူး၊ ဓါးကိုဓါးချင်း
လှံကိုလှံချင်း ရင်ဆိုင်ဖို့သာရှိပါတယ်..” တဲ့။
ဓါးကိုဓါးချင်း လှံကိုလှံချင်း ဆိုတာ ရှေးခေတ်သူရဲကောင်းများ စီးချင်းထိုးတဲ့ ဟာမျိူးဗျ။
အခု ခင်ဗျားကြီးက အထက်စီးကလည်း လုပ်သေး၊ လူမိုက်စကားလည်းပြောသေး၊ ဓါးကိုဓါးချင်း
ကျနော့်အသည်းမှာ ဒီစကားဟာ အမှတ်အသားထင်ပါတယ်။ ကျနော်တင်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဓါးကိုဓါးချင်း
လှံကိုလှံချင်း ဆိုတဲ့ စကားရှစ်လုံးဟာ၊ ကျနော်တို့ခောတ်မှာ ဒါမှမဟုတ် ခြောက်ဆယ်ခုနှစ်လွန်ပိုင်း
လူငယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ အသဲမှာ အမြဲနာနေမဲ့ အမှတ်အသားဖြစ်နေမှာမလွဲပါ။ မကြာခင် တချိန် မှာတော့ အဲဒီအသဲက အမှတ်အသားကို မှတ်တမ်းတင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကြေအောင်ချေကြပါလိမ့်မယ်..။
တရားဝင်ကြေငြာတဲ့ သေသူစာရင်းဟာ (၁၆) ဦးနဲ့ ဒါဏ်ရာရသူ (၄၁)ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာ
ကျနော်တို့ စာရင်းကောက်ကြည့်တော့ အပြည့်အစုံ မဟုတ်သေးတာတောင်(၁၁၄) ဦးရှိပါတယ်။
ဒါဏ်ရာရသူ စာရင်ကလည်း (၁၀၀) ကျော်ပါတယ်။ ဒါဏ်ရာရသူနဲ့ သေသူ မတိမ်းမယိမ်းရှိနေတာ
ကိုကြည့်ရင် ပစ်ကတည်းက သက်သက်ညှာညှာ ပစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်း နန်းဆင်းမိန့်ခွန်းမှာပြောသလို ပစ်ရင်မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး မှန်အောင်ပဲပစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားသိပ်မှန်ပါတယ်။
အဲသည်တုန်းက ဘကြီးကံသိန်းကိုမေးသလိုပဲ ခှနစ်ဆယ်ခုနှစ်လောက်မှာ တက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပတဲ့ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတခုကိုတက်ရင်း ဘကြီးကံသိန်းကို အပန်းဖြေရိပ်သာထဲက ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲမှာ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာတွေ့လို့ ဇူလိုင် (၇) ရက်ညအကြောင်း မေးကြည့်မိပါတယ်။ အဲသည်ညက (၁၁) နာရီလောက်မှာ စစ်တပ်က စစ်ဗိုလ်တွေက ဦးကံသိန်းနဲ့ ဦးနန်းဝေ တို့နာမည်တွေခေါ်ပီး လက်ကိုင်အသံချဲ့စက်တွေနဲ့လှမ်းအော်ပါတယ်။ သမဂ္ဂအဆောက်အဦထဲမှ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ထွက်ပေးဖို့ပါ။ ဦးကံသိန်းနဲ့ ဦးနန်းဝေတို့က အပြင်မှာ ညကြီးသန်းခေါင်မို့ ပစ္စည်းတွေသယ်ဖို့ ကားငှားမရနိုင်တာကြောင့် မနက်မှ ထွက်ပါရစေလို့ တောင်းပန်ကြပါတယ်။
စစ်တပ်က ပစ္စည်းတွေယူဖို့မလို လူချည်းပဲထွက်ရမယ်၊ ဦးကံသိန်းနဲ့ ဦးနန်းဝေမိသားစု မှန်မမှန် လူစာရင်းကိုလည်း စစ်ဆေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ယူနီယံထဲမှာ မသမာသူတွေ ခိုအောင်းနေနိုင်လို့ အပြတ်ရှင်းမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနန်းဝေလည်း သူ့ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပန်းချီကားတွေထားခဲ့ပီး မိသားစုခြေလွတ်လက်လွတ်ထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဦးကံသိန်းလည်း ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကမှန်ကြီးတွေတောင် မသယ်ရပဲ လူလွတ်ထွက်ခဲ့ရတာပါပဲ။ ဦးကံသိန်းပြောတာကတော့ အထဲမှာ ခိုအောင်းနေသူဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။ သူတို့ထင်သလို မြေအောက်ခန်းတွေ ဘာတွေလည်းမရှိဘူဆိုတာလည်း လူလေးတို့အသိပဲ လို့ပြောပါတယ်။ လူလေးတို့ကသိပေမဲ့ မသိတဲ့သူကမသိဘူးပေါ့ ဘကြီးရယ်။ ဒါကြောင့်လည်းသမဂ္ဂအထဲဝင်မိုင်းကပ်ပီး ဇူလိုင်လ (၈)ရက်နေ့ နံနက်လင်းအားကြီးမှာ ကျောင်းသားထုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ယူနီယံကြီးကို မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ပစ်လိုက်ပါတော့သည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော်..အဖေလည်း..အဲဒီ ဘကြီးကံသိန်းဆိုတာနဲ့..ဒီလောက် နှစ်တွေကြာမှ ပြန်တွေ့ပီး..မေးဖြစ်ခဲ့တာ..
၁၉၅၆ ခုနှစ်က တကသ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ (၂၅) နှစ်မြောက်ဖြစ်လို့ တကသ ငွေရတုသဘင် ကျင်းပခဲ့ ကြတာတွေကို ပြန်လည်မြင်ယောက်လာမိပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပွဲလမ်းသဘင်တွေက အဓိပတိလမ်းမတလျှောက်နဲ့ ၀ိဇ္ဖာခန်းမရှေ့မြက်ခင်းပြင် သည်နေရာတွေဟာ ပွဲခင်းပေါ့။ အဲဒီစင်တွေပေါ်မှာတင်တဲ့ ဇာတ်တွေဟာ တကသ အပေါ်ထပ်မှာ ဇာတ်တိုက်ကြတာပေါ့။
အပေါ်ဘက်စာကြည့်တိုက်ခန်းဘက်မှာ စန္ဒယားကြီးတစ်လုံးချပီး သီချင်းတိုက်ကြ အကတွေ
သင်ကြနဲ့ စည်ကားခဲ့တာတွေကို မြင်ယောင်ကြားယောင်လာပါတယ်။
ဤသမဂ္ဂ၏ ကြောင်လိမ်လှေကားမှာ တက်ကာဆင်းကာ ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ သမဂ္ဂ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စုဝေး၍ လဘက်ရည်သောက်ရင်း ငြင်းကြ ခုံကြ သည်များကို နောင်ဘယ်အခါများမှ တွေ့ရတော့မှာလဲ..။
ဒီ သမဂ္ဂအဆောက်အဦကြီးတ၀ိုက် ဘယ်လောက်တောင်လှိုင်းထခဲ့ကြသလဲမသိ..
အဖေရေ.. ဒီလိုပုံစံမျိူးမဟုတ်တောင်..တနည်းနည်းနဲ့တော့..ကျောင်းသားလူငယ်တွေ..စုဝေးကြဦးမှာပါ...လူထုဒေါ်အမာက..ပြောတယ်..“လူ့အညွှန့်ဆိုတာ..ချိူးလို့မရပါဘူး” တဲ့..
ဒီပိုစ့်က ကျွန်တော့်အတွက် ဗဟုသုတ အများကြီးတိုးစေပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ၊ ဦးနုတို့ ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ ၊ ကိုဘဟိန်းတို့ ရဲ့ Character တွေကို စိတ်ဝင်စားလို့အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့၊ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေရဲ့ အကြာင်းတွေကို ပိုသိလာရလို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မြန်မာလို type လုပ်ပေးမယ့်သူရှိလို့အခုမှ မြန်မာလို့ အားရပါးရ Comment ရေးနိုင်တာပါ။ ကျွန်တော့် မြန်မာစာ typing က အလုပ်မဖြစ်လောက်အောင် နှေးလွန်းလို့ ပါ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ပိုစ့်လေးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်တွေအတွက်တော့ အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောင်လည်း ဒီလိုပို့စ်တွေ မကြာခဏ တင်ပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
The very old wound becomesanew one. BTW the first Editor of Oh-way Magazine is Gen. Aung Sann and the very last Editor is my Dad.
သမိုင်းဝင် အဖြစ် အပျက်တွေကို ဖတ်လိုက် သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။